डा. बुढाथोकी भन्छन्ः ब्रसभरी मञ्जन हालेर दाँत सफा हुँदैन, यी तरिका अपनाउनुस् – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Health/डा. बुढाथोकी भन्छन्ः ब्रसभरी मञ्जन हालेर दाँत सफा हुँदैन, यी तरिका अपनाउनुस्
काठमाडौं– दैनिक दाँत माझ्नु सामान्य कुरा हो । खाना खाइसकेपछि तथा बिहान र बेलुका दाँत माझ्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर दाँत कसरी माझ्ने भन्ने विषय सवैलाई थाहा हुँदैन ।
खाना चपाउन र पाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउन दाँतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । मानिसको शरीरलाई चाहिने पोषण खानाबाट प्राप्त हुने तथा त्यसलाई शरीरभित्र पुर्याउन दाँतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले यसलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ ।
चिसोमा खानुस् कोदोको ढिँडो, स्वास्थ्यमा पुग्छ यस्तो फाइदा
क्यान्सर, सुगर र उच्च रक्तचाप जस्ता रोगको औषधी हो यो फूल ! यसरी प्रयोग गर्नुस्
जाडोमा हिटर ताप्दै हुनुहुन्छ ? सावधान !! यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस नत्र ज्यान समेत जान सक्छ..
बिहान खा ली पेटमा खान हुँ दैन यी चीज, जसले हा नी पुर्‍याउँछ